के हो फ्रान्सेली महिला जस्तै - डेटिङ बालिका फ्रान्स देखि भविष्य
के हो फ्रान्सेली महिला जस्तै — डेटिङ बालिका फ्रान्स देखि भविष्य
लोकप्रिय कल्पना, फ्रान्सेली एक लागि सबै अत्याधुनिक र स्टाइलिश, कलात्मक र शारीरिक आनन्दमा लीन. त्यसैले जो मानिस चाहँदैनौं मिति गर्न महिला को यो सुन्दर देश हो । तर फ्रान्सेली महिला छन्, पनि ज्ञात हुन बरु विभिन्न देखि अन्य ‘पश्चिमी’ महिला । र त्यसैले, यो एक राम्रो विचार प्राप्त गर्न के थाहा फ्रान्सेली महिला जस्तै हो पहिले को देशमा शीर्षक. ठूलो अर्थमा शैली पेरिस रूपमा चिनिएको छ, को फैशन राजधानी दुनिया छ । तपाईं मात्र लिन छ एक नजर मा तैयार महिला सुरुचिपूर्ण र आकर्षक लुगा तल हिँडिरहेका को किन बुझ्न फ्रान्सेली मानिन्छ मा फैशन र शैली छ । तर वास्तविक रहस्य पछि आफ्नो उत्तम देखिन्छ कि छ, तिनीहरूले सधैं. फ्रान्सेली महिला पोशाक सुन्दर तर तिनीहरूले कहिल्यै फैशन सिकार । जब, तिनीहरूले एक विनाशकारी बनाउन क्षमता सामान गणना । खर्च धेरै मा बनाउन-माथि, तर तिनीहरूले खर्च हुनेछ विशाल मात्रा मा छाला-हेरविचार संग परिणाम जे भनेर तिनीहरूले बारी मा बाहिर, लग सिद्ध आफ्नो शरीर मा. परिष्कृत के हावी लोकप्रिय पुरुष कल्पना बारेमा फ्रान्सेली महिला को अर्थमा छ परिष्कार तिनीहरूले.
आफ्नो फ्रान्सेली महिला मित्र हुन सक्छ धुवाँ बीस चुरोट एक दिन, तर अविश्वसनीय हेर्न कुनै पनि बुरा को लागि यो छ । साथै, फ्रान्सेली मध्यम वर्ग र क्यारियर महिला सिप र कहिल्यै पिउन । तपाईं देख्न कहिल्यै एक फ्रान्सेली महिला मातेको र माथि फेंक पछि गल्ली को एक पल्ट । सबै लागि ख्याति को फ्रान्सेली खाना र फ्रान्सेली चिज र चकलेट, फ्रान्सेली महिला कहिल्यै अधिभार आफ्नो प्लेट, न त के तिनीहरूले वजन प्राप्त. र अझै तिनीहरूले लाग्न कहिल्यै गर्न कुनै पनि व्यायाम र कुनै पनि नशा बारेमा जल क्यालोरी अमेरिका जस्तै छ । पनि भने, तिनीहरूले यात्रा गर्न छ एक साधारण मीटर, तिनीहरूले उत्प्रेरित गर्नेछ आफ्नो देखि एक अवैध पार्किंग अन्तरिक्ष गर्न अर्को, बरु पैदल दूरी छ । फ्रान्सेली महिला हो बस राम्रो अनुहार र कुनै अधिक.
वास्तवमा, फ्रान्सेली राजनीतिक सजग मान्छे पश्चिमी संसारमा
राजनीति एउटा महत्त्वपूर्ण विषय को चर्चा मा फ्रान्स र महिला पनि पकड निश्चित दृश्य मा विभिन्न नीति र घटनाहरु मात्र आफ्नो देश मा तर ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय. फ्रान्सेली महिला जस्तै आफ्नो पुरुष समकक्षों प्रेम एक एनिमेटेड कुराकानी र मा पूरा गर्न सक्छन्, गरम चर्चा एकदम केही समय को लागि. यी सबै कारणका लागि एक फ्रान्सेली महिला आउन सक्छ बन्द रूपमा झगडालु र राजनीतिक कहिलेकाहीं, तर यो केवल आफ्नो तरिका को रही तपाईंलाई थाहा र तपाईं प्रमाण दिन आफ्नो आफ्नै बौद्धिक र राजनीतिक जागरूकता, तपाईं छन् पक्का बनाउन मा राम्रो छाप उनको यद्यपि, तपाईं गर्न सक्षम नहुन सक्छ उहाँलाई प्राप्त गर्न सहमत.
सबै माथि सोध्न बुद्धिमान प्रश्नहरू जोगिन र टिप्पणी भन्ने अडान मा र अफवाह
हेर्न आफ्नो इटालियन प्रेमिका रूपमा एक व्यक्ति महिला र प्रयास छैन अनुवाद गर्न उनको व्यक्तिगत विकल्प मा घोर बारेमा अनुमानको फ्रान्सेली महिला सामान्य । भनेर चिन्न संस्कृति प्रभाव व्यक्तिगत शैली, तरिका, बोली, हास्य को अर्थमा, सरसफाइ र धेरै अन्य पक्षहरू को सामाजिक जीवित तर सबै पछि, प्रत्येक व्यक्ति फरक छ, त्यसैले जोगिन शून्य जस्तै प्रश्नहरू, ‘छ कि एक फ्रान्सेली कुरा हो ।’ सूचना जब उनको खाने उनको वा लगाएका उनको रूमाल मा एक विशेष तरिका छ । गर्व आफ्नो संस्कृति देखि अलग भएर राजनीतिक, सजग फ्रान्सेली अत्यन्तै गर्व छ, आफ्नो संस्कृति छ । वास्तवमा, कहिलेकाहीं तिनीहरूले पनि को आरोप भइरहेको सांस्कृतिक, तर सबै यो साँच्चै एक प्रकटीकरण को आफ्नो निष्कपट प्रयास राख्न फ्रान्सेली कला र भाषा जीवित, विशेष गरी अनुहार मा वृद्धि को वैश्वीकरण र अमेरिकी प्रभाव मा लोकप्रिय संस्कृति । वास्तवमा, फ्रान्स को एक दुर्लभ विश्व देशहरू जो अझै पनि छ, एक राष्ट्रिय संस्था — é — औपचारिक नियमन फ्रान्सेली भाषा छ । त्यसैले, को ध्यान फसाउन एक फ्रान्सेली महिला, बोल्न प्रयास को एक बिट भाषा छ । यो ठीक अघि, आफ्नो उच्चारण शायद हुनेछ, भयानक — तर यो पक्कै पनि आफ्नो केटी गरेको चासो र त्यो पनि हुन सक्छ. सबै माथि गरौं उनको कुरा उनको मनपर्ने विषयहरू हुनेछ जो सबैभन्दा संभावना हुन फ्रान्सेली कला, वास्तुकला, साहित्य र भोजन । वास्तवमा, फ्रान्सेली को प्रतिष्ठा भइरहेको बरु आक्रामक बारेमा कलात्मक र सांस्कृतिक उपलब्धिहरूलाई आफ्नो देश को. त्यसैले, मा जा संग एक मिति एक फ्रान्सेली महिला, लागि तयार हुन लामो कुराकानी बारे फ्रान्सेली संस्कृति र फ्रान्सेली जीवन । यदि तपाईं इच्छा गर्न उजागर आफ्नो संस्कृति र देश प्रयोग, एक सानो बुद्धि र तफसील बनाउन आफ्नो बिन्दु देखि फ्रान्सेली अधिक कृतज्ञ को र परिष्कृत दृष्टिकोण छ । स्वतन्त्र झुकाउ फ्रान्सेली एकदम स्वतन्त्र प्रकृति मा गर्न यो लामो इतिहास को नारीवादी सिद्धान्त र तपाईं पाउनुहुनेछ कि फ्रान्सेली महिला एक मन को आफ्नै र कुनै समस्या मा व्यक्त । त्यसैले, तपाईं डेटिङ गर्दै एक फ्रान्सेली केटी, तपाईं पक्का दिन उनको प्रशस्त साँस अन्तरिक्ष । दिन उनको प्रेम र समर्थन सम्बन्ध मा तर एक नै समय मा छैन जब त्यो पात पूरा गर्न उनको मित्र वा उनको पछि लाग्न गतिविधिलाई तपाईं बिना. तर, छैन को गल्ती बनाउन भनेर मान उनको स्वतन्त्र प्रकृति को एक चिन्ह छ वा तिरस्कार । प्रश्न गर्दा मा शंका को सट्टा मा अभिनय एक डाह र असुरक्षित तरिका हो । यो छ किनभने एक को पहिलो भन्ने कुरा राखे बन्द फ्रान्सेली महिला, कमजोर भावनात्मक असुरक्षित मानिसहरू जो गर्न सक्दैन माथि मेल गर्न आफ्नो भरोसा र आत्म-आश्वासन छ । यौन फ्रान्सेली संस्कृति एकदम यौन र यो बनाउँछ महिला यहाँ केही सबैभन्दा अचम्मको प्रेम । यो छ भन्न छैन तपाईं गर्न सक्छन् कि मा ओछ्यानमा तिनीहरूलाई कुनै पनि समय तपाईं जस्तै बरु तपाईं को आवश्यकता आकर्षित गर्न र तिनीहरूलाई अधिक सिपालु, बाटो राम्रो छ । महिला जस्तै यहाँ खर्च गर्न पर्याप्त समय मा भने र मूड मा, त्यो सक्छ तपाईं उनको संग उत्प्रेरित गर्छ. जस्तै अरू सबै संग यहाँ, शान र परिष्कार पनि को पहिचान हो, प्रेम बनाउने, फ्रान्सेली शैली ।